Japanese Shares Dip as Investors Await Clarity on U.S. Tariffs | Myanmar Business Today
HomeBusinessRegionalJapanese Shares Dip as Investors Await Clarity on U.S. Tariffs
Stronger worker and environmental protections top changes toanew version of the North American trade deal signed by U.S., Mexican and Canadian officials on December 10 that clears the way foralong-delayed vote in the U.S. Congress.
Democrats prioritized stronger enforcement of worker rights in Mexico, even after Mexico passedalabor reform aimed at ensuring union independence, worker freedoms and higher wages. Mexico has agreed to increase its budget for labor enforcement.
“These are not inspectors, they are not unilateral,” Seade said. “Labor attachés” will be based in Mexico and will provide on-the-ground information about Mexico’s labor practices, the Democrats’ fact sheet said.
A new U.S. interagency committee will oversee environmental protections in Mexico, helped by attachés based in Mexico City who will monitor environmental laws, regulations and practices.
The Trump administration has agreed to drop language that would have allowed it to lower the $800 value threshold under which shipments can enter the United States tax-free without an act of Congress, people familiar with the decision said.
The so-called “de-minimis” level benefits small business owners, but some Trump administration officials claim that it provides an unfair subsidy to Chinese firms selling goods to U.S. consumers through Amazon.com Inc., Ebay Inc. and other online platforms.
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်၊ မက္ကဆီကိုနှင့် ကနေဒါအရာရှိများက မြောက်အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာ အဆိုပါ စာချုပ်အသစ်တွင် ပိုမိုခိုင်မာသော အလုပ်သမားနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးတို့မှာ အဓိက အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပြီး အမေရိကန် ကွန်ဂရက်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် ကြန့်ကြာနေမှုအတွက်လည်း လမ်းရှင်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စာချုပ်တွင် ပြင်ဆင်လိုက်သည့်အချက်များကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့သော် ဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမေရိကန်၊ မက္ကဆီကိုနှင့် ကနေဒါ အရာရှိများ၏ ပြောဆိုချက်အရ အဆိုပါ စာချုပ်သည် နှစ်စစ်ကုန်သွယ်မှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၂ ထရီလီယံ ရရှိအောင် ပံ့ပိုးသွားပြီဖြစ်ကာ ၂၆ နှစ်သက်တမ်းရှိ North American Free Trade Agreement စာချုပ်ကို အစားထိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်ဆင်လိုက်သည့်အထဲတွင် အလုပ်သမားကိစ္စ၊ သဘာဝပတ်ဝန်ကျင်း၊ ဆေးဝါး၊ စတီးနှင့် အလူမီနီယာ၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိစ္စတို့ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
SourceMEXICO CITY (REUTERS)
Previous articleAs Old Computers Are Recycled in Thailand, Locals Pay the Price